Dufcadii 21-aad ee ardayda Jaamacadda Muqdisho oo u bilawday todobaadka dhaqanka |
Dufcadii 21-aad ee ardayda Jaamacadda Muqdisho oo u bilawday todobaadka dhaqanka
Munaasabad aad u balaaran si wayn loosoo agaasimay loona qabtay ardayda cusub ee dufcadii 21-aad ee Jaamacadda Muqdisho ayaa lagu qabtay xarunta ugu wayn Jaamacadda Muqdisho.
Munaasabadan oo kusaabsanayd todobaadka dhaqanka ee Jaamacadda Muqdisho laguna baro ardayda nidaamka Jaamacadda u dagsan lagana rabo ardayda inta uu ku guda jiro sahanka waxbarashada inuu ilaaliyo nidaamka udagsan jaamcadda, waxaa kale ee ardayda kusoo bandhigaan todobaadka dhaqanka waxyaabaha ay halabuurka u leeyihiin ee ardayga ku duugan.
Ugu horayn waxaa halkaas ka hadlay guddoomiye kuxigeenka arimaha akaadeemiyada ee Jaamacadda Muqdisho Dr. Cali Daahir Maxamed ayaa soo dhaweeyay ardada cusub isagoo usheegay inay nasiib u heleen toban sano kadib inay noqdaan ardaydii ugu horeeyay ee nasiibka u yeelatay inay waxbarashadooda halkaan ku qaataan, wuxuuna ardada usheegay in siyaasada ay qaadatay Jaamacadda Muqdisho ee ah in ardayda, maamulka jaamacadda iyo shaqaalaha oo dhan oo qof walbaba uu ku beero geed mirood si meeshan ay u noqoto meel dadka oodhan ay kusoo hirtaan.
Prof. Maxamed Xuseen Ciise Liibaan oo ah guddoomiye kuxigeenka arimaha xariirka ee Jaamacadda Muqdisho ayaa kasheekeeyay heerarkii kala duwanaa iyo horumarkii ay ku talaabsatay jaamacadda Muqdisho, wuxuuna ardada kula dardaaramay inay waqtigooda ka faa’idaystaan waqti badana ay geliyaan waxbarashada wuxuuna u rajeeyay guul iyo horumar.
Sidoo kale waxaa munaasabadan kahadlay ustaad Maxamed Xuseen Cumar oo ah masuulka ugu sareeya geeska Afrika ee hay’adda Qadar Charity iyo ganacsade Soomaaliyeed sheekh Daahir Sheekh Axmed oo iyagana u hambalyeeyeen ardada cusub ee kusoo biirtay Jaamacadda Muqdisho kulana dardaaramay aradayda inay dadaal dheeri ah muujiyaan.
Ugu dambayn waxaa isna halkaas kahadlay guddoomiya Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal Cali oo u hambalyeeyay ardayda cusub iyo waalidiintooda doorashadii ay soo doorteen Jaamacadda Muqdisho.
“Waxaan ku faraxsanahay 10 sano kadib in xaruntii ugu weynayd ee Jaamacadda Muqdisho aan maanta munaasabadaan todobaadka dhaqanka ee Jaamacadda Muqdisho ku qabanayno.”
“Jaamacadda Muqdisho waa lagu soo kala horeeyay ee lama kala laha aqoonyahankii dhidibada utaagayna waxay isku dhaarsadeen in Jaamacadda Muqdisho loo sameeyay shacbiga Soomaaliyeed.”
Mar uu kahadlayay guddoomiyaha Jaamacadda Muqisho waxyaabaha ay gaarka utah
ay Jaamacadda Muqdisho inay ka mid yihin waxbarasho kusalaysan akhlaakh, karti iyo islaanimmo, imtixaankeeduna uu yahay mid hufan ardaygeedana uu yahay mid la ixtiraamo isna uu ixtiraamo macalimiintiisa iyo maamulkiisa horayna ay usoo saartay dad tayo leh oo bulshada soomaaliyeed wax baddan oo lataaban karo u qabtay.
“Jaamacadda Muqdisho waa jaamacad u taagan inay soo saarto hogaamiye ummadiisa u horseeda wanaag sharaf iyo cisi kana ilaalisa ama ladagaalanta waxyaabaha xunxunka ah ee ay ka mid yihiin qabyaalada iyo miraheeda xun.” sidaasna waxa yiri guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal.
wuxuuna kusoo gabagabeeyay Gudoomiyaha jaamacadda muqdisho Dr.Ibraahim Maxamed Mursal Cali , “Waxaan balan qaadeynaa in jaamacadda muqdisho aad ugu imandoontaan cadaalad, akhlaaq iyo waxbarasho tayeeysan.